माधव नेपालले मन्त्रालय धेरै मागेपछि मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ढिलाई, कसले कति मन्त्रालय मागे ? « रिपोर्टर्स नेपाल
माधव नेपालले मन्त्रालय धेरै मागेपछि मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ढिलाई, कसले कति मन्त्रालय मागे ?
प्रकाशित मिति : 2021 August 30, 6:32 pm
काठमाडौं, १४ भदौ । नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टीका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालले आफ्नो पार्टीलाई ७ मन्त्रालय दिनुपर्ने अडान राखेका छन् । आज बसेको सत्तापक्षीय गठबन्धनको बैठकमा अध्यक्ष नेपालले ७ वटा मन्त्रालय नदिईए सरकारमा सहभागी हुन आफूहरुलाई अप्ठ्यारो रहेको सुनाएका थिए । सुरुमा, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले माधव नेपालको पार्टीलाई ५ वटा मन्त्रालय दिने भनेका थिए । तर, नेपालले आजको गठबन्धनको बैठकमा ७ वटा मन्त्रालय दिईनुपर्ने अडान राखेका थिए ।
बैठकमा सहभागी एक नेताकाअनुसार अध्यक्ष नेपाल आज आक्रामक रुपमा प्रस्तुत भएका थिए । उता, जनता समाजवादी पार्टी, नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले पनि आफूहरुलाई ६ वटा मन्त्रालय दिनुपर्ने अडान राखेका छन् । माओवादी केन्द्रले पनि ७ वटा मन्त्रालय मागेको छ । माओवादी केन्द्रबाट यसअघि जनार्दन शर्मा र पम्फा भुषाल मन्त्री भैसकेका छन् । माधव नेपालले एमाले विभाजन गरेर एकीकृत समाजवादी गठन गरिसकेपछि सरकारलाई पूर्णता दिने प्रधानमन्त्री देउवाको तयारी थियो ।
तर, मन्त्रालय भागबण्डाको कुरा नमिल्दा सरकारले पूर्णता पाउन अझै केही दिन समय लाग्ने निश्चित् भएको छ । नेकपा (एकीकृत समाजवादी) बाट मन्त्री बन्ने आकांक्षीहरु धेरै छन् । नेपालले सबैलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बाध्यता भएकोले कम्तिमा पनि ७ वटा मन्त्रालय दिन आग्रह गरेका हुन् । एकीकृत समाजवादीबाट प्रेम आले, वेदुराम भुषाल, कृष्णकुमार श्रेष्ठ, विरोध खतिवडा, रामकुमारी झाँक्री, मेटमणि चौधरी,भवानी खापुङ र कल्याणी कुमारी खड्का मन्त्री बन्ने चर्चा छ । file photo
मतगणनास्थल पुगिन् सृजना, जित्नेमा अझै आशावादी
काठमाडौं, ५ जेठ । नेपाली काँग्रेसबाट काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयरकी उम्मेदवार सृजना सिंह मतगणनास्थल पुगेकी छिन्
काठमाडौं, ५ जेठ : सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई प्रतिनिधिसभा बैठकमा उपस्थित हुन निर्देशन
काठमाडौँ,५ जेठ । सरकारले गणतन्त्र दिवस त्रि–द्विवसीय कार्यक्रमका साथ मनाउने भएको छ ।प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को